Nge-27 ka-Epreli, iVenkile ye-Apple yesithathu e-United Arab Emirates ivula | Ndisuka mac
Abafana abavela eCupertino bayaqhubeka nokusebenza ukwandisa inani leevenkile zabo kwihlabathi liphela kwaye Kungekudala emva kokufikelela kwiivenkile ezingama-500. KwaSoy de Mac sihlala sikwazisa ngokukhawuleza malunga nezicwangciso zenkampani zokwandisa malunga noku, izicwangciso okwangoku ezibandakanya ukuvula ivenkile yesithathu e-United Arab Emirates ngo-Epreli 27, ivenkile ebekwe eDubai, edolophini eDubai Mall, encinci okanye akukho nto ibiyintsusa ukubiza le mall. I-Apple ihlaziye iwebhusayithi yayo kweli lizwe ibhengeza umhla kunye nexesha eya kuthi livule iingcango zalo ngalo.
Ngo-Epreli 27 ngentsimbi ye-16: 10 emva kwemini, u-Apple uza kuvula iVenkile entsha ye-Apple emva komsitho obizwa ngokuba yi-Creativity Connected, njengoko sikwazisile kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo. Ivenkile ehleli kwimigangatho emibini yeli ziko lokuthenga liya kuvula iingcango zalo iintsuku ezisixhenxe ngeveki. Ukusukela ngeCawa ukuya ngoLwesithathu iiyure ziya kusuka kwi-23 ukuya kwi-10 iiyure, ngelixa ngoLwesine ukuya ngoMgqibelo iiyure ziya kuba ukusuka kwi-XNUMX kusasa kude kube phakathi kobusuku. Le yivenkile yesithathu yeApple kweli lizwe emva kokuvulwa kweevenkile eDubai Mall ye-Emirates nase-Abu Dhabi Yas.
Njengakwimeko ezininzi, iApple iya kubonelela ngeendibano zocweyo zasimahla kuyo yonke iminyaka kunye neekhampasi zabantwana. IiVenkile zeApple ziye zaba ngaphezulu nje kwevenkile. Yindawo yokufunda ngezixhobo ze-Apple, indawo yokufumana ubuchule bethu obungaphakathi, indawo yokuhlangana yendalo, kunye nendawo yokufunda kunye nokuphefumlelwa.
Okwangoku iApple ayijolisanga kuphela ekuvuleni iiVenkile ezintsha zeApple, kodwa nayo ijolise ekuhlengahlengiseni ezinye zeyonavenkile indeNjengevenkile ebekwe eUnion Square, eSan Francisco, okanye kwivenkile yasentsomini kwiFifth Avenue eNew York, ivenkile evala iingcango zayo kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo ukuze iphinde ihlaziywe, ilungiswe sele ifuna.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Nge-27 ka-Epreli, iVenkile ye-Apple yesithathu e-United Arab Emirates iyavula
I-LG UltraFine 5K ebizwa ngokuba liGada eliGqwesileyo kwi-2017 TIPA Awards